Garyaqaanka Ganacsiga ee Xaniga Cannabis - Wadahadallada Sharciga ee Scott Roberts MMFLA iyo LARA
Qareenka Ganacsiga Xaniga Cannabis
Qareenka Ganacsi ee Xaniga Cannabis Scott Roberts
​Ganacsiga xashiishadda ee Michigan ayaa isku soo dhacaya marka Gobolku bilaabayo codsiyada ganacsiyada madadaalada Noofambar 1, 2019. Michigan waxay sharci ahaan u isticmaashay dadka qaangaarka ah 2018 iyada oo leh 56% codka laakiin waxaa la saadaaliyay in ganacsiga madadaalo ee ugu horeeya aanu furi doonin illaa Guga 2020 Toddobaadkan Miggy iyo Tom waxaa ku biiray qareenka ganacsiga cannabis Scott Roberts ka Sharciga Scott Roberts si looga wadahadlo muuqaalka xashiishadda ee gobolka Michigan.
Halkan Michigan, sharciyada cannabis iyo qawaaniinta ayaa si joogto ah isu beddelaya hirgelinta sharciyada ayaa isbeddelaya iyadoon ogeysiis la sameyn. The MRA (Wakaaladda Sharciga ee Michigan) kaasoo xukuma marijuana, mararka qaar wax buu ka beddeli karaa aqrintooda waxyaalaha laakiin inaad si firfircoon uga qaybqaadatid ma ogaan doontid. Macluumaad fara badan ayaa ku jira shabakadda laakiin haddii ay ka badan tahay hal sano ama labo jir waxaa jirta fursad kama dambeys ilaa hadda. - Scott Roberts
Waa maxay Sharciga Scott Roberts?
Shirkad ganacsi oo adeeg buuxa oo xashiishad ah
Waxay lashaqeeysaa bilaabida iyo ganacsiyo aasaasay
Waxay ka caawisaa dhammaan ganacsiga xashiishadda inay u hoggaansamaan, illaa shati u siinta, ilaa macaamil ganacsi
Caawinta ganacsiga xashiishadda caafimaad inay u hoggaansanto sharciga Michigan Medical Marihuana (MMMA), Sharciga ruqsad u siinta Adeegyada Marihuana (MMFLA), Sharciga Ruqsad u siinta iyo Arrimaha Sharciga (LARA), xayiraadaha aagaynta degmada, iyo sharciyada kale ee lagu dabaqi karo.
La aasaasay 2014
Xaruntiisu tahay Detroit, Michigan
Waa maxay Xashiish Microbusiness?
Ganacsato yar ayaa loo oggol yahay inay koraan oo ay ka baaraandegaan illaa iyo 150 xashiishad cannabis oo ay soosaaraan kuna iibiyaan badeecadaha si toos ah macaamiisha wax soosaarkooda
Microbusinesses Waxaa loo sameeyay in laga ilaaliyo gobolada sida California iyo Michigan shirkadaha "xashiishadda weyn" ee doonaya inay ka faa'iideystaan ​​suuqa xashiishka
Codsadeyaasha microbusinesses looma baahna inay yeeshaan liisan marijuana caafimaad sida shatiyada madadaalada ay u baahan yihiin
Microbusinesses waxay leedahay fursado badan oo fursado ganacsi ah laga soo bilaabo xashiishadaha loo yaqaan 'cannabis-ardes' illaa makhaayadaha iyo tiyaatarada filimada
Waa maxay Mikiganders Waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato Xuquuqdooda Cannabis
Xeerarka Cannabis si guud ahaan waa ay adag yihiin laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xuquuqdaada macmiil ahaan iyo degane ahaan. Haddii aad tahay ganacsade ama macaamil aan caadi ahayn, weligaa ha ka labalabeynin inaad la xiriirto qareen si aad u hesho caddeyn iyo tilmaan. Deganayaasha Michigan ee ka weyn da'da 21 waxay awoodaan:
Haysata gurigooda illaa 10 oz oo ubax ah iyo 2.5 oz gurigooda dibaddiisa
Haysato ilaa 15 garaam oo xashiishadda cannabis ah
Ku koraan illaa 12 dhir guryahooda
Ku soo qaado xashiishadda ku jirta xirmo xirxiran oo calaamadaysan oo ku keydsan jirridda baabuur (ama meel kale oo gaarigaaga ah oo aan si sahlan loo heli karin)
Sharciga Scott Roberts
Bilaabashada iyo ganacsiyada aasaasay waxay badanaa raadiyaan qareen ganacsade xashiishad oo ka tirsan Michigan si ay ugu hoggaansanto sharciga ganacsiga ganacsiga marijuana ee rasmiga ah. Wax dhib ah maleh haddii aad u baahatid laysanka MMFLA, aad yeelato hanti ma guurtada ah, ama aad rabto inaad aasaasto iibsashada ama iibinta ganacsiga xashiishadda saxda ah, garyaqaanka ganacsiga cannabis ee saxda ah ayaa caawin kara.
Maxay yihiin Xeerarka Ganacsiga Xashiishadda ee Michigan?
Noofambar 1, 2019, gobolka Michigan wuxuu qaaday talaabada ugu dambeysa ee qawaaniinta u oggolaanaya codsadayaasha inay bilaabaan ganacsi marijuana madadaalo ah. Codsiyada hore waxaa horayba loogu gudbiyay khadka tooska ah, waxaanan aragnaa codsadayaal badan oo doonaya inay si wanaagsan wax uga sheegaan xeerarka iyo shuruucda ku saabsan ganacsiga marijuana.
Shaqada ugu weyn ee qareenka ganacsiga cannabis ee Michigan ayaa ah in laguugu wargaliyo sida loo maro nidaamka dacwada, iyo sida loo yareeyo halista sharciga ah. Garyaqaan wanaagsan wuxuu bixin doonaa taageero buuxda xagga go'aan ka gaarista qeybta ganacsi ee lagama maarmaanka u ah foomka dalabka ee aad u baahan tahay inaad ka xareyso gobolka iyo IRS.
Sida laga soo xigtay Wakaaladda Sharciga ee Michigan, milkiilayaasha ganacsigu waxay u baahan doonaan inay ka soocaan caafimaadka marijuana raaxada haddii ay doonayaan inay ka shaqeeyaan gobolka. Guud ahaan marka laga hadlayo, majiro farqi kiimiko oo u dhexeeya marijuana caafimaad iyo madadaalo. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad bixiso canshuurta xad dhaafka ah 10% ee khusaysa marijuana madadaalo. Tani waxay ka dhigeysaa ganacsiga marijuana madadaalo waxyar ka badan baahi badan marka loo eego xeerarka iyo taageerada maaliyadeed ee habboon.
Sidee buu Qareenka Ganacsi ee Xaniga Cannabis kuugu caawin karaa?
Haddii aad go'aansato inaad bilowdo ganacsi marijuana caafimaad, garyaqaanka ganacsiga xashiishadda ee Michigan ayaa kaa caawin kara dhinacyo badan. Waa inaad qareenkaaga kala tashataa nooca laysanka aad rabto inaad ku hesho meheraddaada.
Noocyada shatiyadaha Ganacsiga Xashiishadda ee Michigan
Markaad tixgalinayso helitaanka laysan, waa inaad diyaarisaa dalabka ganacsiga cannabis. Gobolka Michigan, waxaad dalban kartaa 5 liisamo oo kala duwan. Kuwani waa:
• Xarunta bixinta
• Gawaar aamin ah
• Goobta u hoggaansan nabadgelyada
Adiga oo ah ganacsade ah, waxaad go aansataa inta udhaxeysa sedex fasal ruqso usare Waxa jira noocyo A, B, iyo C ah oo shatiyo ah kuwaas oo tilmaamaya tirada guud ee dhirtu aad kori karto.
Xarunta bixinta waa nooc ka mid ah xashiishadda marijuana. Haddii aad rabto inaad u hesho xarun ku-meel-gaadh ah ganacsigaaga, kuma lihi kartid wax danno dhaqaale ah oo ku saabsan xarunta u hoggaansamida amniga ama gaadiid aamin ah. Waxaad sidoo kale qiimeyn doontaa 3% canshuurta oo dheeraad ah ee dakhligaaga soo gala.
Processor waa ganacsi u adeegsada xashiishadda canroois kana timaada wax soo saarka, soosaarka, iyo waxyaabaha kale ee xashiishadda.
Xaqiiji gaadiid qaada xashiishadda cannabis iyo lacag udhaxeysa xarumaha. Si aad u noqoto gaadiid aamin ah, looma diiwaangelin karo bukaan ama daryeele.
Imtixaannada xarunta u-hoggaansanaanta amniga ee maadada 'THC' ee marijuana, iyo xaaladdan, waa inaad shaqaaleysiisaa qof shahaado haysta shaybaarka ama sayniska caafimaadka.
Ma jiraan xeerar rasmi ah oo odhanaya inaad lahaato hanti sax ah oo loogu talagalay ganacsiga xashiishadda. Codsadeyaal badan ayaa hantidooda geliyey heshiis, ka dibna codsanaya laysanka, oo haddii la oggolaado, guriga la iibsan karo. Qaabkaan, waxaad hubineysaa inaad dhaqaale ahaan lagu aaminay howsha dalabka.
Sida loo Codsado Shatiga Marijuanaanka Caafimaadka ee Michigan
Si aad u dalbato liisanka marijuana ee caafimaad ee Michigan, waa inaad leedahay taariikh asal ah, tiro sanadood ah oo ku habboon Michigan, iyo caasimad ku filan. Mar haddii aad ka gudubto howsha aqoonsiga noocaan ah, waxaad dooran kartaa u qalmidda shatiga.
Waa muhiim in la ogaado in magaaladu magaaladu ay leedahay amar-bixin ku-habboon oo u oggolaaneysa goobta marijuana-ha ee degmada saxda ah. Haddii tani khuseyso magaaladaada, waad dhisi kartaa tas-hiilaadka lagama maarmaanka u ah ganacsigaaga marijuana caafimaadkaaga.
Kadib markaad gudubto nidaamka uqeybinta, waxaad u gudbi kartaa codsi liisankaaga. Waxaa muhiimad gaar ah leh in la qeexo dhammaan faahfaahinta ganacsigaaga iyo meesha saxda ah ee xarumahaaga. Haddii aadan bixin macluumaadka saxda ah, waxaad ku jirtaa halis sare in ay diidaan saraakiisha MMFLA.
Sababtaas awgeed, waxaa wanaagsan inaad kala tashatid qareenkaaga ganacsiga xashiishadda canabis ee ku saabsan dhammaan faahfaahinta lagama maarmaanka ah. Haddii aad rabto inaad dalbato liisanka ganacsiga caafimaadka, waa inaad tixgelisaa dhammaan shuruucda ku habboon degmadaada. La xiriir qareenka ganacsiga xashiishadda saxda ah ee Michigan oo aad u hesho waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu furato ganacsi marijuana caafimaad oo guuleysta.
La xiriir Qareenka Ganacsiga Xashiishadda ee Michigan
Mid heer sare ah Xaqiijinta Sharciga Ganacsiga ee Marijuana u adeegaya bilowga ah iyo ganacsiyada aasaasay inay sumaddooda ku yeeshaan Wershadaha Cannabis. Naga Qareenka cannabiss ogaato sharciyada iyo suuqyada ku xeeran caafimaadka marijuana madadaalo iyo sidoo kale Hemp iyo CBD.
As qareenada cannabis waxaan bixinaa talo qaanuun sharci iyo ganacsi ah si aan kaaga caawino bilowgaaga kobcinta xarunta, xarunta bixinta, sheybaarka wax lagu baarayo, xarunta baarista amniga, shirkadda gaadiidka xasiloon, xashiishadda cannabis.
La xiriir Scott Roberts Law
Hel tilmaamaha khariidada →